ဂိမ်းနားကြပ် - MEETION
တွေ့ဆုံ | အကောင်းဆုံးဂိမ်းပစ္စည်းကိရိယာအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုမ္ပဏီ
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ဂိမ်းနားကြပ်.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် MEETION.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် MEETION.
အရည်အသွေးရှိသောစနစ်လိုအပ်ချက်များအရကျွန်ုပ်တို့၏ QC အဖွဲ့သည်မော်နီတာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။.
Meetion Gaming ထုတ်ကုန်များသည်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များကိုအားသာချက်ပြည့်စေနိုင်သည်။
ကြိုးမဲ့ optical USB ကွန်ပျူတာ 2.4GHz ကြိုးမဲ့ mouse r545
item no ။ : MT-R545အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: ပန်းရောင်, အပြာရောင်, Cyan, White, Blackရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာEan: 69703447311844ဖော်ပြချက် - စွမ်းအားနိမ့်သောကြိုးမဲ့ Office Mouse
Meetion Metallic ပရိုဂရမ်မာ Mouse M985
◆အလူမီနီယမ်အလွိုင်းအခြေစိုက်စခန်း၊ အဆင့်မြင့်မှန်ဘီလူးနေရာချထားမှုပုံစံသည်မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဆိုလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားနိုင်သည်။resolution resolution မြင့်မားသော၊mic မိုက်ကရိုဆပ်၏အကြိမ်ပေါင်းငါးသန်းကျော်သက်တမ်းသည်။polymer ပုံမှန်ပေါ်လီမာများထက် ၁၀ ဆပိုသောပိုလီမာ wear-tahan ခံခြေဘောင်များ◆သဘာဝသည်စွန်ပလွံပုံစံနှင့်ဒီဇိုင်းကိုက်ညီမှုရှိသည်။◆အမြန်နှုန်း / အပြည့်အ ၀ မြန်သော USB interface， တစ်စက္ကန့်လျှင်မြန်နှုန်းနှုန်း 480MBPS ။◆ဂိမ်းများ၊ မာလ်တီမီဒီယာထိန်းချုပ်မှုမုဒ်ပြောင်းခြင်း။◆လေး DPI ဂီယာ။
MENDION USB ကြိုး Gaming Mouse M975
◆အဆင့်မြင့်မှန်ဘီလူးအညွှန်းများအကူးအပြောင်းပုံစံသည်မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မဆိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်သည်။◆အလွန်မြင့်မားသော resolution, gaming အထိခိုက်မခံတုံ့ပြန်မှု။◆ MicroWitch ၏အကြိမ်5သန်းကြာမြင့်စွာ0န်ဆောင်မှုပေးသည်။polymer မြင့်မားသော polymer0တ်ဆင်ထားသောခြေထောက်များကိုခုခံကာကွယ်ခြင်း,natural သဘာဝသည်စွန်ပလွံပင်ပုံသဏ္ with ာန်နှင့်အတူဒီဇိုင်းအလိုက်ဖြစ်သည်။◆မြင့်မားသော / အပြည့်အမြန်နှုန်း USB interface, တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်စက္ကန့်များအတွက်ထုတ်လွှင့်နှုန်း 480Mbps ။◆ဂိမ်းများ, multimedia control mode switch ကို။◆ DPI ဂီယာလေးခု။
မိုက်ခရို HP010 အရွယ်ရှိဆူညံသံကိုဖျက်နိုင်သည့် Stereo သားရေဖြင့်ပြုလုပ်သော Meetion Wired Gaming Headset
ပစ္စည်းအဘယ်သူမျှမ။ : MT-HP010အမှတ်တံဆိပ်: MEETIONအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်EAN: 6970344731363ဖော်ပြချက်: Gaming Headset 3.5MM Audio Pin * 2
Meetion Gaming Mouse Bungee မတ်တပ်ရပ်ကာဝါယာကြိုး Cable Holder U001
Mouse Bungee မတ်ယာကြိုးကြိုးကြိုးကိုင်ဆောင်သူ U001Fully ၄ လုံးလုံးပါ ၀ င်သောဆိပ်ကမ်းများDev Device + Cable စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်◆သုညဆွဲ Drag mouse ကို◆တိုက်ရိုက် port access ကို◆လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်သည့်ရပ်တည်မှုee MeeTion - LOGO အပြာရောင်အလင်းရောင်ဖြင့်Shenzhen Meetion Tech Co. , Ltd. အကောင်းဆုံး Mouse Bungee ရပ်ရပ် ၀ ါယာကြိုးကြိုး U001 ပေးသွင်းသူ
SEFR16 GAMING ကုလားထိုင်ကသင့်ကိုပထမ ဦး ဆုံးလက်တွဲကြုံတွေ့ရဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
MT-Chr16 Cuter ပန်းရောင်ဂိမ်းကုလားထိုင်သည်မင်းသမီးလေး၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ Ergonomic Design သည်ရှည်လျားသောဂိမ်းများ, ရုံး, ဖျော်ဖြေရေးစသဖြင့်အလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ သင့်အားကိုယ်ထိလက်ရောက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနားယူခွင့်ပြုပါ။
Ergonomic 2.4G ကြိုးမဲ့ဒေါင်လိုက်ဒေါင်လိုက် Mouse R390 / M390
item အမှတ် _M-r390အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာအတွက်Ean: 69703447311888ဖော်ပြချက် - 10 မီတာကြိုးမဲ့လက်ခံခြင်းအကွာအဝေး, အရေပြားကဲ့သို့ပစ္စည်းများသည်လက်ကိုပိုမိုသက်သာစေသည်
Poseidon G3360 Pro 12000 DPI Macro Gaming Mouse Mouse
ကြာရှည်ခံသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော Gameplay အတွက်အဆင့်မြင့်တုန့်ပြန်မှုနှင့်ဆက်သွယ်မှု။◆အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောနည်းပညာ။ Ergonomic ဒီဇိုင်း, လက်ရာမြောက်သောထိတွေ့ခြင်း, လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်မှု, အရည်အသံများ,◆7တန်း Switchable DPI ။ DPI သည်အိမ်, ရုံးနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်လွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနေသည်။◆ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂိမ်းအာရုံခံကိရိယာ-pmw3360 ။ ဂိမ်းအမျိုးမျိုးအတွက်လွယ်ကူစွာကစားရန်လွယ်ကူသည့် Professional Sensor ။◆သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဘေးဒဏ်ခံမှုဘေးထွက်ချုပ်ကိုင်မှု။ Ultra-Dunable စင်ကြယ်သော silicone ဘေးထွက်ဆုပ်ကိုင်မှုများသည်အစိုင်အခဲခံစားမှုနှင့်တစ်သက်တာလုံးကိုအသုံးပြုသည်။
အကောင်းဆုံး HiFi 7.1 ဂိမ်းများကိုနားကြပ်& MIC HP030 နှင့်အတူ Backlit Backlit ကိုဝိုင်းရံထားသည့်အသံနားကြပ်ပါ
item no ။ : MT-HP030အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာEan: 69703447315151561ဖော်ပြချက် - အကောင်းဆုံး 7.1 ဂိမ်းနားကြပ်, အရည်အသွေးမြင့်မားသောဝန်းကျင်နားကြပ်။
Meetion Colors Rainbow Backlit ဂိမ်း Keyboard ကို K9300
◆သက်တံ့ရောင် backlit ။တစ်ဦးရော်ဘာဖျာနှင့်အတူ◆သတ္တုပန်းကန်။◆သောင့်သက်သာနှင့်ပျော့ပျောင်းသောသော့။◆ဂိမ်းကစားဘို့အသင့်တော်။◆ 19 သော့ Anti-Ghost ။◆ LED ကိုအရိပ်အယောင်နှင့်အတူဝင်းသော့ခတ် function ကို။◆ Windows XP / Vista / 7/8/10, Mac OS နဲ့အတူလိုက်ဖက်တဲ့။◆စသည်တို့ကိုမာလ်တီမီဒီယာ, အင်တာနက်, 12 Fn ဖြတ်လမ်းခလုတ်◆ရွှေကို USB Interfacе plating ။
Backlit Rainbow Gaming Keyboard နှင့် Mouse Combo C510
item no ။ : Mt-C510အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာEan: 69703444311160ဖော်ပြချက် - သက်တံဂိမ်းကီးဘုတ်နှင့်မောက်စ်များ။
သင်၏အီးမေးလ် (သို့) ဖုန်းနံပါတ်ကိုအဆက်အသွယ်ပုံစံဖြင့်သာထားခဲ့ပါ၊ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သော pc ကွန်ပျူတာကစားခြင်းပစ္စည်းများအတွက်သင့်လျော်သောဈေးနှုန်းချိုသာစွာပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။